Abuuritaanka cunto iyo nuxurka guud. Xeerarka miisaanka lumay sidan.
Cunto loogu talagalay kooxda dhiigga: alaabta lagu taliyo dadka kala duwan
Noocyada cuntooyinka ee kooxda dhiigga, xaaladaha, alaabooyinka
Dhawaan, cunnooyinka kooxeed ee dhiigga ayaa noqday mid caan ah si ay u noqoto tartan ku haboon xayiraadaha kale ee cuntada ee kuu ogolaanaya inaad ka takhalusto miisaanka xad-dhaafka ah. Qarsoodiga sirta ayaa ah in qofku uusan khasaarin naftiisa. Qeybta ugu hooseysa waa tan qofka qaba kooxo dhiig ah, waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad cuntid cuntooyin gaar ah.
Taariikhda abuurista iyo nuxurka weyn
Soddonkii qarnigii ugu dambeeyey ee la yiraahdo Peter D'Adamo iyo qoraa Catherine Whitney ayaa qoray buug dhan oo ay ku faahfaahsan yihiin mabaadii'da nafaqadaas. Qeybta ugu hooseysa waa in kooxda dhiigga ay si toos ah ugu tixgeliyaan waxa cunidu tahay in qofku u hoggaansamo. Sida laga soo xigtay horumarinta D'Adamo, dhammaan alaabooyinka waxay u qaybsan yihiin faa'iido, dhexdhexaad ah iyo waxyeelo. Sidaa darteed, haddii aad doorato qaybta ugu dambeysa, waxaad heli doontaa miisaan, faa'iido lehna waxay keeni doontaa miisaan lumis.
Qodobkan waxaanu kuu sheegi doonaa macluumaad guud oo ku saabsan nafaqada ee koox kasta oo dhiiga ah oo ku siinaya miis leh qaybo kala duwan.
1 koox: "Hunter"
Noocani wuxuu ka kooban yahay in ka badan soddon boqolkiiba dadka adduunka. Waxaa la aaminsan yahay in kooxdani ay ahayd awoowayaasheenna.
Awoodaha: dheefshiidka xasiloon iyo difaaca jirka
Gacan-siinta: liidashada liidashada isbeddelka cuntada iyo deegaanka, waxay u nugul yihiin xasaasiyad
In menu of dadka sida daruuriga ah waa in ay ku jiraan hilibka (laakiin aan doofaarka), cuntada badda, khudradda cusub iyo miraha, iyo sidoo kale kibis ka soo bur saygeeda.
Waa inaysan noqon badar badan, siiba barafka iyo sarreenka. Miraha iyo buckwheat ayaa lagula talinayaa isticmaalka.
Laga soo bilaabo cuntada, waa inaad gabi ahaanba ka saaraysaa dhammaan kaabajka, marka laga reebo barokroli, galley, suugo jilicsan iyo marinades.
Kooxda 2aad: "Farmaajo"
Taariikh ahaan waxaa la aaminsan yahay in dadka qaba noocaan dhiigga ay ka soo baxeen ugaarsadaan waxayna bilaabeen inay hoggaamiyaan qaab nololeed oo aad u dheer.
Tilmaamo xoog leh: dheef-shiid kiimikaad sare leh iyo difaaca jirka ayaa kaliya noqon doona haddii aad u hoggaansanto cunto sax ah. Awooda sare ee la qabsiga isbeddelka cuntada iyo xaaladaha nolosha.
Tabar-darrada waxaa lagu muujiyay in ay u nugul yihiin cudurrada faafa iyo jirrooyinka dheef-shiid kiimikaadka ah, iyo sidoo kale xanuunada dareenka.
Cuntadu waa inay ka buuxsamaan khudradda iyo miraha cusub, marka laga reebo fiiqan si ay u dhadhamiso (boomaatooyin, xashiishad), digirta iyo badarka.
Xaddiga xadidan waxaa haboon in la isticmaalo alaabta caanaha laga sameeyo, iyo weliba si ka wanaagsan sidii loo bedeli lahaa soya.
Haddii ay suurtagal tahay, waa inaad iska ilaalisaa badi badaha (boodhka, caviar, cows). Haddii ay jirto baahi loo qabo in si aad ah loo yareeyo miisaanka, hilibka sidoo kale waa mid u qalma in la cuno ugu yaraan.
Kooxda 3aad: "Nomad"
Dadka qaba kooxdan dhiigga ee ku jira dhulka ayaa ah in ka badan labaatan boqolkiiba. Waxay u muuqdeen natiijada isku dhafka jinsiyada, sidaa darteed cuntada waa in ay noqotaa mid firfircoon.
Awoodaha waxay ka kooban yihiin nidaam adag oo dareen ah iyo awoodda si deg-deg ah ay ula qabsadaan xaaladaha cusub.
Ma jiraan wax xoogaa liitay, laakiin haddii aadan ku dhejin cuntada habboon ee kooxdan dhiigga, cudurada infakshanka iyo cudurada isbitaallada ayaa soo bixi kara.
Tirada aan xadidnayn waxaad cuni kartaa hilibka, ukunta, cuntada badda iyo caano, khudradda iyo miraha.
Waa lagama maarmaan in laga fogaado digaag iyo hilibka doofaarka, kaluunka iyo kaluunka.
Kuwani waa dadka ugu dakhliga badan, oo ka mid ah dadweynaha guud ee adduunka, oo aan ka badnayn boqolkiiba toddoba. Waxay ku kala duwan yihiin hab aad u xasaasi ah, nidaam difaaca daciif ah. Waxaa lagu talinayaa in la cuno hilibka, kalluunka, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, khudradda iyo miraha. Laakiin lumitaanka miisaanka xad-dhaafka ah waxaa lagama maarmaan ah in laga reebo hilibka cas ee dufanka, basbaaska, karabuurka, miraha iyo badarka.
Hoos waxaa ku qoran jadwalka aad ka abuuri kartid liiskaaga. Sida laga soo xigtay haweenka kuwaas oo isku dayay habkan cuntada, cuntada ayaa noqon karta mid aad waxtar u leh isticmaalka dheeraadka ah.
+ Waxyaabaha faa'iido leh
0 Waxyaabaha dhexdhexaadka ah
- Alaabta aan la rabin
Dhaqdhaqaaq jireed oo jimicsi jireed loogu talagalay cayilka
Jimicsiyada jimicsiga jirka
Pilates waxay u adeegtaa badhida
Waa maxay farqiga u dhaxeeya iskuxidha iyo Pilates?
Yumbada biyaha - biyaha aerobics
Sidee lumisaa culeyska markaad jimicsanayso baaskiil jimicsiga?
Dooro xagaaga nooca jirdhiska
Hambalyo Maalinta Hooyo ee Waalid-sodkeed, gabar weyn, hooyo ka timid caruurta. Ereyada salaanta quruxda ee aayadda iyo qadarka, sawirrada, SMS gaaban
Muffins leh maraqa tufaaxa
Maraq digaag leh boqoshaada iyo kareemka
Da'da ugu wanaagsan ee dhalashada ilmaha
Daraasad ku saabsan xaaladda niyadjabka ee haweenka ku jira xilliga dhalmada kadib
Cuntada dhadhanka leh: shukulaatada shukulaatada leh buuxinta
Saadaalinta qorraxda ee calaamadaha jimicsiga
Horoscope loogu talagalay haween-Gemini July 2017
Popcorn leh shukulaato iyo caramel
Irina Rozanova, nolosha gaarka ah
Neefsashada iyo xanuunka joogtada ah: calaamadaha, ogaanshaha, daaweynta
Beowijiyan maalin kasta
Sidee loo dhagxiyaa dhegaha gabadh
Saaxiibka bariga: qurxinta ee Bazar Bazar with Ural Gems
Wixii lagama maarmaan u ah in la sameeyo ilmaha miisaanka
Salmon baradhada suugada liinta
Ka qaadista finanka laabta iyo laabta